Best Muqaal Songs Talo - Songs for Muqaal ah
> Resource > Talooyin > Best Muqaal Songs Talooyin
Ma qiyaasi kartaa filim aan codka? Ama waxaad iska indho tiri karno music asalka marka aad daawato filimka naxdin ah? Sidoo kale, heeso waa mid aad u muhiim ah in filimada slideshow photo. Heeso slideshow ayaa awood u leeyihiin awood leh si ay u dejiyaan xaaladda of a slideshow iyo si cilmiyaysan dareen sax ah ka aad Muqaal dhegeyste. Isticmaal songs slideshow ugu fiican ee aad ugu jeceshahay. Hoos waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah ugu wanaagsan music slideshow photo, sida heesaha slideshow jacayl , hooyada Maalinta slideshow songs , iwm mid kasta oo iyaga ka dooro oo ka dhigi slideshow la music , sawiro iyo videos, iyadoo la isticmaalayo software slideshow ah, DVD Muqaal dhise oo uu leeyahay sumcad oo ah dejinta slideshow fantastik ah oo si fudud wadaagga ah ee TV, YouTube iyo computer.
1. Songs u Hooyada Maalinta Muqaal
2. Top 10 Love Muqaal weyn Songs u Lovers
3. Sad Love Muqaal Songs soo jeedina
4. Best Songs Oldies Love of 80
5. Download oo dhan music kor ku xusan oo lacag la'aan ah oo la TunesGo
1. Songs Maalinta Muqaal Hooyada
Maalinta Hooyada, dadka inta badan ku siin ubax (carnations iyo Ubax) sida hadiyado Maalinta Hooyada . Hadda waxaa jira doorasho kale, waxaad samayn kartaa slideshow sawir aad hooyadiis sawiro qurux badan oo lagu biiriyo taabashada hees ku saabsan Hooyada sida hoos, kuwa ay noqon doontaa gabayadii ugu wanaagsan ee hooyooyinka in ay muujiyaan jacaylka aad u gaarka ah si aad hooyo weyn.
Jacayl by Aretha Franklin 1. A hooyada
Aretha Louise Franklin waa heesaa Maraykan ah oo muusikiiste. Franklin injiilka mustaqbalkiisa gabay iyada ka bilaabay aabbeheed, kaniisad Wasiirka Champions League Franklin ee sida ilmo.
2. A Song Wixii Mama by Boys II Ragga
3. Wax kasta iyo wax kasta oo ay Martina McBride
Martina Mariea Schiff, oo loo yaqaan xirfad sida Martina McBride, waa music dalka oo gabayaa ahaa, Xisbi, iyo record soo saare American. Waxay caan ku ah iyada duwan hees ku soprano oo iyada wax pop dalka.
4. Gacaliye Hooyo by Melissa Champlion
record ma helay
5. Ma xusuusataa by Phil Colins
Philip David Charles "Phil" Collins, LVO, waa heesaa Ingiriisi, Xisbi, multi-instrumentalist, soo saare heesaha iyo actor.
6. weligaaba Young by Rod Stewart
Roderick David "Rod" Stewart, CBE waa dhagax weyn oo gabayaa ahaa British-Xisbi. Waxa uu ku dhashay kuna soo barbaaray London, waa Ingiriisi iyo isirka Scottish. Stewart waa mid ka mid ah fanaaniinta heesaha ugu iibinta ee waqtiga oo dhan, isagoo ka iibiyey in ka badan 100 milyan oo diiwaanka dunida oo dhan.
7. Love weyn ee dhan ay Whitney Houston
Michael Masser, Linda Caqiido
Whitney Houston Elizabeth ahaa Maraykan ah oo gabayaa ahaa, Jilaa, soo saare, iyo model. Sanadkii 2009, Guinness World Records iyada daliishaday sida fal ugu abaal dumar ah ee waqtiga oo dhan.
8. Waxaan inaan dhahdaa anigu waan ku jeclahay In Song by Jim Croce
Country dad, dad
James Yuusuf "Jim" Croce ahaa dad Maraykan ah iyo fanaanada caanka ah ee dhagaxa weyn ka soo daahay 1960 iyo 1970. Intii u dhaxaysay 1966 iyo 1973, Croce sii daayay shan studio albums oo 11 kali.
9. Ilmahaaga ma waxaan ahay by Barry Manilow
Pop, dhagaysiga Easy
Barry Manilow waa Maraykan ah oo gabayaa ahaa-Xisbi iyo soo saare. Waxa uu si fiican loogu cajalado sida "Mandy", "ma ilka-caddeyn karaa adiga oo aan joogin", iyo "Copacabana".
10. Waxaan Xusuusnow Hooyo by Blac ciiro
Ciiro Blac waa heesaa ah Dad badan ayaa sheegaya in 'ciiro blac' waa shakur tupac, sababtoo ah waxa uu leeyahay si sax cod isku mid ah iyo qaab. Waxa uu mustaqbalkiisa ka bilaabay sanad ka dib markii Tupac ee dhimashada (1997).
11. Waxaan doonayaa Hooyo in weligoodba sii jirayaan by Cyndi Lauper
Pop, Oo dhagax weyn, ruxruxo cusub
Cynthia Ann Stephanie "Cyndi" Lauper waa heesaa, Xisbi, Atariishada iyo LGBT dhaq-Maraykan ah. Her mustaqbalkiisa ayaa fidisay in ka badan 30 sano.
12. Waxaan jeclaan lahaa inaad u jeclaataa by Natalie Cole
Natalie Maria Cole waa Maraykan ah oo gabayaa ahaa, Xisbi, iyo qaab. Gabadhii Nat King Cole, Cole kacay inuu guul muusikada ee bartamihii 1970-sida artist ah R & B oo la hits ee "Tani waxay noqon doontaa", "sooci karo", iyo "Our Love".
Billy Joe "BJ" Thomas waa heesaa caan ah oo Maraykan ah. Waxa uu si gaar ah loogu yaqaanaa hit gabayadiisuna oo ka mid ah 1960 iyo 1970, taas oo u muuqday on pop ah, dalka, iyo gooldhalinta music Christian.
14. Mama sheegay in ay jiri lahaa maalmood oo kale ah ay Shirelles
Shirelles waxa ay ahaayeen koox gabar American in gaari caan hore 1960. Waxay ka koobnayd iskuulka Shirley Owens, Doris Coley, Addie "Micki" Harris, iyo Beverly Lee.
15. Momma by Boys 2 nin oo
Maalinta by Jessie L. Gaynor 16. Hooyada
Jesse L. Smith Gaynor ahaa laxamiistaha Maraykan ah oo muusiko ah ee caruurta. Waxay ku qoray music ee hobeeyaa oo reer fiican u yaqaan, "ayuu Lulmo Doon The", iyadoo la kaashanaysa qoraaga carruurta, Alice CD
Wondershare TunesGo - Download music free la TunesGo
2. Top 10 weyn Love Muqaal Songs u Lovers
Heeso jacayl ayaa lagu soo bedelato jeer. Halkan calaamadee jacayl songs oldies laakiin goodies. Hoos waxaa ku jacaylka heeso weyn ay u muujiyaan aad dareen gaar ah inta aad ku jirtid jacaylka.
1. Cruisin 'by Huey Lewis & Gwyneth Paltrow
Gwyneth Kate Paltrow waa Jilaa, oo gabayaa ahaa, iyo qoraa cunto American. Paltrow helay ogeysiis hore ee shaqada filimada sida Kulamadan nafsi Seven, soo horjeeda Brad Pitt iyo riwaayadaha muddada Emma, ​​soo horjeeda Jeremy Northam.
2. Ha u tag Jebinta qalbigayga by Elton John & Kiki D.
Ann Orson (Elton John), Mapka (Bernie Taupin)
3. Love aan dhamaadka lahayn by Diana Ross & Lionel Ritchie
4. Golaha Love by Amy Grant & Vince Gill
Amy Lee Grant waa American ah oo gabayaa ahaa-Xisbi, muusikiiste, qoraaga, warbaahinta shakhsiyadda iyo aktarada. Waxay la og yahay hawl music Christian casriga ah iyo crossover guul si ay arbushin music ee 1980 iyo 1990.
5. Waxaan doonayaa inaan Grow Old Kula by Adam Sandler
Adam Sandler Richard waa Maraykan ah actor, oo ahaa majaajiliiste, screenwriter, soo saare filim, iyo muusikiiste.
6. Islands ee Stream ee ay Dolly Parton & Kenny R.
7. Waa Your Love by Tim McGraw & Diinta Hill
Samuel Timothy "Tim" McGraw waa American ah oo gabayaa ahaa, Xisbi iyo actor. Waxa lagu guursaday in ay la shaqayn Fanaanada Faith Hill tan iyo 1996, oo waa ina ciyaaryahanka xilli danbe baseball-duubey McGraw. McGraw ayaa sii daayay saddex iyo toban albums studio.
8. Just Adiga iyo ayaan Eddie Bakayle & Crystal Gayle
Crystal Gayle waa Maraykan ah music dalka Fanaanada guulaystay Abaal-marinta.
Floyd Collin Wray waa music dalka Fanaanada American, oo loo yaqaan xirfad sida Collin Raye, oo hore sida Bubba Wray. Under magaca dambe, oo uu duubay sidii xubin ka mid ah askartii oo Wrays u dhexeeya 1983 iyo 1987.
10. Waxaad tahay Beautiful by James Blunt
James af, Sacha Skarbek, Amanda Ruuxa
James Hillier Blount, si fiican u yaqaan by magiciisa stage James af, waa Ingiriisi Fanaanada-Xisbi. Waxa uu u soo saxiixay la EMI hor ammaanka heshiis la duubo Records Atlantic iyo kastar Records ah.
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan songs murugo. Hoos waxaa ku qoran liis ay ku qoran heeso jacayl murugo. Heesahaas ayaa ku haboon yihiin sheekooyinka kuwa lumay jecel yahay ama jacayl oo kaliya laga badiyay weyni ah.
1. Dhammaan igu wareegsanaa by Flyleaf
Post-grunge, Oo dhagax weyn Christian, dhagaxii weynaa kale
Flyleaf waa band bir culus American ah, la sameeyay ee Belton iyo macbudka, gobollada Texas ee 2002. band ayaa charted dhagaxa caadiga ah, pop Christian iyo qaybaha biraha Christian.
2. la yaabka leh sababtoo ah waa ay ku dhow ayaa
Emo, dhagaxii weynaa kale
Ayaa ku dhow ahaa urur dhagax American Christian ka Clearwater, Florida, ugu fiican u yaqaan for la horraysiinayo oo ay durbaan garaace Underoath hore iyo vocalist Haaruun Gillespie.
3. Neefta by Paramore
dhagaxii weynaa kale
Paramore waa band ah dhagaxa weyn American ka Franklin, Tennessee, la aasaasay sanadkii 2004. band ayaa hadda ka kooban vocalist hogaanka Hayley Williams, bassist Jeremy Davis, iyo guitarist Taylor York.
5. jebiyey Seether feat. Amy Lee.
Seether waa Koox dhagaxyada adag South African la aasaasay bishii May 1999 ee Pretoria, South Africa. Band ayaa markii hore loo sameeyay magaca Sharoon Gas ilaa ay ka bedelayaan in Seether 2002. Afeef waa album asalka iyo u saftay calaamad weyn oo.
6. Celler Door by baxso Masiirka
Post-qoon gaystay, metalcore, emo
Baxso Masiirka waa urur Maraykan ah post-qoon gaystay ka Las Vegas, Nevada, la aasaasay sanadkii 2005 oo asal ahaan kasoo jeeda Pahrump, Nevada. Waxaa loo saxiixay in Kow iyo Toddoba Music.
7. Halkan Goes Waxba by Treaty ee Paris
Treaty ee Paris
Punk pop, dhagaxii weynaa kale
Treaty ee Paris waa urur ah dhagaxa weyn American ka Chicago, Illinois. Band ayaa ka kooban shan xubnood, Phil KOSCH, Dan Wade, Alex Maier, Chris Insidioso iyo Mike Chorvat.
8. Halkan waxaan mar kale by Paramore
9. Waxaan Sidaas jirran by Flyleaf ahay
Bir Alternative, bir nu
10. Waan ka xumahay by Buckcherry
Dhagaxyada adag, dhagax weyn kale
Buckcherry waa band Maraykan ah dhagaxa weyn ka soo Anaheim, California aasaasay 1995. band ayaa sii daayay laba albums, Buckcherry iyo Time qarxa, ka hor inta uusan kala diridda xagaagii 2002.
11. Learnig ku le'anayna Boys Like Girls
Punk Pop, Oo dhagax weyn pop, dhagaxii weynaa kale
Boys Like Girls waa urur ah dhagaxa weyn American ka Boston, Massachusetts. Waxa asaasay sanadkii 2005, kooxda helay aqoonsi caadiga ah marka la sii daayo ay album ugu horeeyay ee is-cinwaankeedu yahay.
12. ha Tani Tag by Paramore
13. ma jecla A Competition (Cover) by Paramore
Ricky Wilson, Andrew White, Simon Rix, Nick Baines, iyo Nick Hodgson
Dhagaxayga weyn Indie
4. Best Oldies Songs Love of 80
Weligaa ma maqashay hees oo aad u yaqaan, laakiin aan iyaga u magacaabi karaa? Mise ma jirtaa hees oo xasuus aan la ilaawi karin ee idiin keeni inay? Hoos waxaa ku heeso jacayl oldies in weligood ahaayeen kuwo aad loo jecel yahay oo weli ciyaarin by radio waqti ka waqti. Waxaan rajaynayaa in aad hesho la yaab leh la "Haa, waa!" ka oldies socda jacaylka heeso liiska.
1. Against, misane by Phil Collins
Dhagaxayga weyn jilicsan, pop
2. Mar walba oo uu weligiis by milicda
Kulaylku waa urur Funk / caweyska caalamiga ah ee la sameeyay sanadkii 1975.
3. Kalidaa by Heart
Dhagaxayga weyn Hard
Heart waa duubida American ah in marka hore guusha helay Kanada iyo dambe ee Maraykanka iyo dunida oo dhan.
4. Dhammaan out of Love by Air Supply
Graham Russell iyo Clive Davis
Air Supply waa labada ciyaaryahan ee Australian dhagax weyn oo jilicsan ah, oo ka kooban British-dhashay fanaanada-Xisbi iyo guitarist Graham Russell iyo vocalist hogaanka Russell Hitchcock.
Rock, Oo dhagax weyn dalka, Oo dhagax weyn oo jilicsan
Boston waa urur ah dhagaxa weyn American ka Boston, Massachusetts, in guulo ay ugu weyn inta lagu guda jiro 1970 iyo 1980.
6. garabyada Broken by Mr. Mister
Mr. Mister ahaa urur American dhagax weyn pop ugu caansan ee 1980.
7. taxadir la'aan Ruuxna, by Wham!
Pop, buluug ama weershe ah naftiisa, jazz siman
Wham! ahaa labada ciyaaryahan ah muusikada Ingiriisi sameeyay George Michael iyo Andrew Ridgeley ee hore 1980. Waxay si kooban ayaa lagu yaqaan in Maraykanka Wham! UK ay sabab u tahay dagaalada ka magacaabayo geesiyo Maraykan ah.
8. Crazy Waayo, waxaad by Madonna
Madonna Louise Ciccone waa Maraykan ah oo gabayaa ahaa, Xisbi, Jilaa, qoob iyo ganacsato.
9. joogey laga yaabaa in ay Tiffany
Tiffany Renee Darwiish, sidoo kale loo yaqaan Tiffany, waa heesaa American ah, Xisbi, Atariishada iyo dhallintaada icon hore. Iyadu waa ugu weyn, Waayo, 1987 cover of "Waxaan qabaa inaan nahay kaligey", asal ahaan diiwaan by Tommy James iyo Shondells ee 1967.
10. Abuulahab, weligeed ah ee Bangles ayaa
Bangles waa ah duubida pop American sameeyeyna ee Los Angeles 1981. Kooxda ayaa asalkiisu ka soo jeedo ee 1980, isagoo dhaliyay dhowr hit kali tobankii sano ee u.
11. daacad ah by Journey
Rock, Oo dhagax weyn oo jilicsan
Journey waa duubida American sameeyeyna ee San Francisco ee 1973, oo ka kooban xubno hore ee Santana oo Frumious Bandersnatch.
12. dheer by Dan Fogelberg
Daniel Grayling "Dan" Fogelberg ahaa Maraykan ah muusikiiste, Xisbi, laxamiistaha, oo multi-instrumentalist oo music waxaa uu ku dhiiraday by ilo kala duwan dad, pop, Oo dhagax weyn, classical, jazz, iyo bluegrass.